Group-ka B ee Koobka Adduunka Dumarka oo lasoo gaba-gabeeyay… + SAWIRRO – Gool FM
(Paris) 17 Juuunyo 2019. Xulka qaranka Gabdhaha Germany ayaa guul muhiim ee 4-0 ah ka gaaray dhiggooda South Africa kulan ka tirsan heerka guruubyada Koobka Adduunka ee haweenka 2019.
kulankan ayaa ka tirsanaa group-ka B ee koobka Adduunka Dumarka.
Qeybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 3-0 ay ku hogaaminayeen Xulka qaranka Gabdhaha ee Germany.
Daqiiqadii 14-aad Xulka qaranka Gabdhaha USA ayaa hogaanka u qabtay ciyaarta kaddib markii ay gool u dhalisay Melanie Leupolz, waxayna sidaas ku noqotay 1-0 iyadoo caawinta goolkan ay lahayd Verena Schweers.
29 daqiiqo marka ay ciyaarta ahayd Sara Daebritzayaa ayaa ka dhigtay 2-0.
Ku dhawaad dhamaadka qeybta hore ee ciyaarta gaar ahaan daqiiqadii 40-aad Alexandra Popp ayaa hogaanka u dheereysay Xulka qaranka Gabdhaha Germany, waxayna ciyaarta ka dhigtay 3-0
Qeybtii labaad ee ciyaarta marka dib leysugu soo laabtay xulka qaranka gabdhaha Germany oo si weyn ugu gacan sareeyay ciyaarta ayaa sii joogteeyay qaab ciyaareedkooda wanaagsanaa, iyagoo markale sameeyeen fursado kale ee halis ah.
58 daqiiqo waxay ciyaarta soo gaba gabeysay oo 4-0 ka dhigtay Lina Magull.
Ugu dambeyn kulanka ayaa ku soo dhammaaday 4-0 oo xulka gabdhaha Germany ay kaga adkaadeen dhiggooda South Africa kulan ka tirsan heerka guruubyada Koobka Adduunka ee haweenka 2019.
Xulka qarnaka Germany ayaa waxay sidaas ugu gudbeen 9 dhibcood wareega 16-ka ee Koobka Adduunka ee haweenka 2019, kaddib markii ay wada badiyeen 3-da kulan ee Group-kooda.
Dhinaca kale xulka qaranka Spain oo kulankoodii 3-aad heerka Group-yada u ahaa mid kala bax ah waxay la ciyaarayay dhigooda China wuxuu ku soo idlaaday kulankooda barbaro 0-0 ah, waxayna farqi dhanka goolasha ah ugu soo baxeen kaalinta 2-aad iyagoo u gudbay wareega 16-ka ee Koobka Adduunka haweenka 2019.
Waa markii ugu horeysay oo gabdhaha Spain ay gaaraan wareega bug baxda taariikhdooda.